Home Wararka Aadan Barre Ducaalle oo u digay dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ku Dhaqan Dalka...
Aadan Barre Ducaalle oo u digay dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ku Dhaqan Dalka Kenya
Aadan Barre Ducaale oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya oo la hadlayay dadweyne badan oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa dhalinyarada uga digay inay adeegsadaan Shiishada.
Aadan Barre ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi looga baahan yahay inay ka fogaadaan adeegsiga Shiishada, maadaama ay dhibaato nafeed iyo mid dhaqaalo ku tahay.
Ugu dambeyn wuxuu sheegay in looga baahan yahay dumarka dhankooda inay ku adkaadaan xerashada xijaabka oo aysan ka tagin dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida.
Previous articleCiiidamada Dowladda oo Maanta Xiray Wadooyin hor leh &Shacabka Magaalada Muqdisho oo ka cabanayo
Next articleQalbi Dhagax Guriga oo ka Deganyaahy Magaalada Muqdisho oo Ciidamo Nabad Sugid ah loo diray& Maxaa dhexmaray?
Mahdi Guuleed Khadar : ”Farmaajo iyo Biixi qadka Telfoonka ayeey ku...